Ogaden News Agency (ONA) – Wariye Caan Ahaa oo Xabsiyada Itoobiya Kudhintay, Sababta.
Wariye Caan Ahaa oo Xabsiyada Itoobiya Kudhintay, Sababta.
Posted by Dulmane	/ July 27, 2017
War goordhaw nasoo gaadhay ayaa sheegaya in ciidanka dhaqan xumada kucaan baxay ee wayaanuhu ay xabsiga kudhex dileen mid kamid ah wariye yaasha mudada dheer u xidhnaa.
Sida xogta aan kuhelayno wariye caan ahaa oo mudo u afduubnaa kooxda TPLF ayaa maanta shalay maydkiisa laga soo saaray mid kamid ah xabsiyada magaalada Addis Ababa oo uu mudo kuxidhnaa.
Qaar kamid ah ehelada wariyaha ladilay ayaa warbaahinta usheegay in uu wariyuhu udhintay jidh- dil aad ubadan oo lagu hayay mudadii dheerayd oo uu xidhnaa, waxayna sheegeen in uu ugeeriyooday isla jidh dilkaas.
Ururka suxufiyiinta Itoobiya ayaa dhankooda canbaareeyay dilka loogaystay wariyaha waxayna sheegeen in ay jiraan wariye yaal kale oo badan oo aan wax rajo nololeed ah oo dambe laga sugaynin, sidoo kale ururka suxufiyiinta ayaa sheegay in ay jiraan wariye yaal aan lahaynin raq iyo ruux toona oo laga waayay xabsiyada dadaka laku iqaabo.
Sidoo kale hay’adaha xuquuqul insaanka ayaa aad u canbaareeyay dilka iyo dirxumada loogaystay wariyaha waxayna xukuumada wayaanaha ku eedeeyeen in ay si xun uladhaqanto warbaahinta iyo wariye yaasha kahowl gala Itoobiya.
Kooxda TPLF ayaa wariyaha ku eedaysay in uu garab siiyay dadka kacdon wadayaasha ah ee kasoo horjeeda xukuumadooda, waxayna sheegeen in ay mariyeen waajibaadkiisii maadaama oo uu kasoo horjeeday nidaamka jira, waasida ay hadalka udhigeen e.